Dalkani Kenya oo la sheegay in uu awood u leeyahay in sanad kasta ay qaabilaan 5 milyan oo dalxisayaal – The Voice of Northeastern Kenya
Dalkani Kenya oo la sheegay in uu awood u leeyahay in sanad kasta ay qaabilaan 5 milyan oo dalxisayaal
Dowlada dalka ayaa shegtay in dalkani Kenya uu awood u lee yahay sidii lagu kusoo jiidan lahaa dalxiisayaal gaareysa shan Milyan oo qof sanad walba.
Jimi Kariuki oo ah gudoomiyaha gudiga dalxiisayaasha dalka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yiqaano KTB, ayaa sheegay in labadii sano ee u dambeysay uu jiray hoos u dhac kuyimid waxda dalxiiska taas oo ka dhalatay kadib markii qaar kamid ah wadamada reer galbeedka ee digniin u direen muwaadiniintooda.
Digniintaasi ayaa daba socotay kadib markii qeybo katirsan dalka oo ay kujiraan goobaha loo dal xiis tago ay ka dhaceen weeraro kala duban oo ay dad badan ku dhinteen.
Sanadkii aynu soo dhafnay ee 2016-kii ayaa dowlada waxaa ay bilawday olola xoogan oo ay ku dooneysay in ay dib u soo celiso kalsoonida iyo fikradaha qaldan ee laga hasto dalka.
Kenya ayaa qaabishay 1,785,382 dalxiisayaal ah intii lagu guda jiray waqtigaasi adkaa ee 2011-kii oo muwaadinia looga digay in ay dalkani Kenya imaadan iyadoo waqtigaasna dowlada dalka soo xareysay lacago dhan 97.9 billion.
2015-kii waxaa qaab dalxiis iyo qaaban kalaba ku yimaaday mas’uuliyiin sar sare oo caalamka ka socday taas oo ka dhigtay in Kenya ay xiligaasi imaadan 1,180,546 waxaana u soo xarooday lacag dhan.
Bishii Marso Madaxweynaha dalka ayaa u magacaabay gudoomiyaha gudiga dalxiisayaasha dalka Mr Kariuki oo xilkaasi hayn doono 3 sanadooda waxaan sii hayay Kitili Mbathi oo isagan loo magacaabay agaasimaha guud ee laanta adeega xayawaanada ee KWS.
Mr Kariuki ayaa hoosta ka xariiqay in dowlada ay wax walbo u sameyneyso sidii ay dib u soo celin laheed dalxiisayaashi horay imaan jiray qeybo katirsan dalka iyadoo hadda la filayo in 1.6 milyan oo dalxiisayaal ay dalka soo boqdaan.
KTB ayaa sheegtay in 500 oo milyan loom eel dhigay in tilaabadaasi lagu fuliyo kuwaas oo isugu jiro dalxiisayaasha gudaha iyo dibadaba.
← Haweeney isku dayday in ay isbitaalka guud ee garissa ka xado cunug dhalaan ah oo la qabtay
Aqalka barlamaanka oo loo gudbiyay mooshin ka dhan ah gudoomiyaha gudiga EACC →